Soomaali / Su’aalaha Had iyo Jeer la’is weydiiyo
Codsiga diiwaan-galinta iskuulada ma waxaa laga buuxin karaa barta internetka mise warqadda formka ah?
Labaduba. Haddi aad doontid waxaad buuxin kartaa codsiga warqadda ah haddii kale booqo bogga internetka apply.spps.org halkaas waxaad ka helaysaa adeega school finder oo aad ku ogaan kartid in iskuulku siinayo ilmahaaga adeega gaadiidka/transportation.
Maxaa dhacaya haddii aan soo gudbiyo codsiga diwaan-galinta in ka badan hal mar?
Waxaa laguu raacayaa codsigga ugu dambeeyay oo aad soo dirtay iskuulka aad ku dooratay.
Goormee laisoo ogeysiinayaa iskuulka aan helay?
Qoysaska codsiyadooda dhiibtay ugu dambayn February 23, 2018 waxay helayaan ogeysiinta qaabilitaanka(ama in ardaygu lagaliyay liiska sugitaanka /waiting list) ugu dambayn billowga bisha Abriil 2017.
Haddii uu ilmahaygu xiligaan dhigto iskuul kaas oo u ka siiwadan rabo fasallada u haray ma wuxuu u baahanyahay in uu markale codsado?
Uma baahno in uu mar kale dib u codsado, ilmahaagu wuxuu sii joogayaa iskuulka uu hada joogo.
Haddii aan doono in aan iskuulka badelo, ma waxaan luminayaa booskii iskuulka uu hada ilmaha ii dhigto?
Haddii aad codsi dhiibtid kaliyo booskagii hore ma luminaysid, lakiin haddii iskuul kale lagaa soo aqabalo booskii aad ka haysatay iskuulkaagi hore ma sii haysan kartid.
Haddaad go’aansato inaad iskuulka hadda aad dhigato joogto, markaad ka heshay aqbalaad iskuul kale, waa in aad diiddaa qaabilitaanka cusub. Waxaad ogeysiisaa Xarunta Meelaynta Ardayda ka hor intaan la gaarin taarikhda ku qoran aqbalitaanka iskuulka cusub. Fadlan ogow waxaa dhici karta in uusan boos kaaga banaanayn iskuulkaagii hore haddii aad sidan samayn waydo.
Qoysaska aan dagnayn St. Paul ma codsan karaan Saint Paul Public Schools?
Haa, qaanuunka Minnesota ee ku aadan diwaan-galinta furan (open enrollment law) ayaa digaya in ay qoysasku codsan karaan iskuul ka baxsan deegaanka ay degganyihiin. Qaabitaankooda waxuu ku xiran yahay boosaska iskuullada ka banana iyo qawaaniinta u degsan.
Sidee ayaan sare ugu qaadi karaa fursada laigaga aqbali karo iskuulka aan rabo?
Sababaha kor u qaadi karo fursdahaaga waxaa ka mid ah:
Codsiga oo aad dhiibatid ugu damabyn February, 23, 2018.
In aad ku nooshahay nawaaxiga uu ku yaalo dugsiga hose iyo sare ayaad ku helaysaa fursad dheeri ah in codsigaaga lagaga hormariyo codisyada dadka aan degganayn aaggaasi in kasto oo ay dhacdo in qawaaniinta u deggan iskuulka iyo boosaska banani ay xadido tirada ardada laga diwaan-galin karo iskuul.
Fursad intee la’eg ayuu ilmahaygu u haystaa helitaanka iskuulka aan doorano?
In kasto oo ay tirado kaladuwan tahay, qoysaska badanaa waxaa laga qaabilaa iskuulka kowaad oo ay doortaan.Sidoo kale shuruucda diiwaan-galinta ayaa xadidaysa tirada ardada ee lagu qaabili karaa iskuullada qaarkood.
Haddii aan codsigayga dhiibto ka hor xiliga kama dambaysta ah, ma waxay ii fududaynaysaa in aan helo iskuulka doorkayga ah?
Maya, codsiyada la qabto ugu dambays February 23, 2018 oo dhan si sinaan ah ayaa loo tix-galiya.
Ma hubaal baa in ilmahaygu lagu qaabilayo mid ka mid ah iskuulada aan doortay eek u qoran liiska codsiga?
Maya. inta badan Iskuullada waxay helaan codsiyo ka badan bosaska ay hayaan. Haddii ay iskuullada aad xulatay ay wada yihiin kuwa ay boosas yar ka banana yihiin ama kuwa helo tiro badan oo codsiya ah , waxaa yaraanaysa fursada ah in lagugu qaabilo. Si aad kor ugu qaadid fursadaha helitaanka iskuulka dookhaaga ah, ku dar liiska iskuulada aad dooranaysid iskuulada bulshada (Community Schools) oo ah iskuul ku yaal nawaaxiga aad degantahay.
Ka waran haddii aan soo degnay degmada Saint Paul goor ay dhamaatay codsi- qabashada?
Ardadu waxaa la diwaan-galiyaa sanadka oo idil ma aha xiliga diwaan-galinta oo kali ah. Xiliga kama dambaysta ah ee codsiya (deadline) waa xilliga ugu fudud ee la helo iskuulka dookhaaga ah. Xarunta qaabilitaanka ardada wa ay furantahay sanadka oo idil waxayna kala shaqaysaa qoysaska doorashada iskuulada. Haddii aad doonaysid in aad aad balan diiwaan-galin ku saabsan aad samaysaatid fadlan kawac xarunta diwaangalinta ardada 651-632-3760.
Meeqa sano jir ayuu ilmahaygu iskuulku ku aadayaa?
Ilmuhu haddii uu gaaro shan sano kahor maalinta ugu horreysa Sebteembar, 1, 2018 wuxuu diyaar u yahay in uu aado Kindergarten xilli-iskuuleedka 2018-19. Cunuga waa in u jiraa afar sano kahor Sebteembar, 1, 2018 si uu u galo barnaamijka pre-Kindergarten sanad dugsiyeedka 2018-19.
Maxaa laga yeelaayaa Haddii ilmahaygu uusan wali garin shan sano kahor barnaamijka Kindergarten, lakiin aan rabo in uu iskuulka bilaabo 2018-19?
Ardayda qaar ayaa diyaar u noqota Kindergarten inta ayan gaarin shan sano. Haddii uu ilmahaagu gaari doono shan sano inta u dhexaysa September 8 ilaa iyo Oktoobar 31, waxaa loo qiimayn in uu sii bilaabo Kindergarteen. Qiimaynta waxaa ka mid ah si loo ogaado caruurta uu fahamkoodu samreeyo. La xiriir xarunta diiwaan-galinta ardada si aad u heshid akhbaarta ku saabsan saacadaha iyo maalmaha qimmaynta la sameeyo.
Ogow: Xiliga kama dambayska ah ee codsiga qiimaynta ilmaha si loogu qaabilo waa Arbacada, Maarso 21, 2018.
Haddii aan degnahay degmada St. Paul, hubaal miyaa in ilmahaygu boos ka helayo Saint Paul Public Schools ?
Haa, Laga bilaabo Kindergarten ilaa iyo fasalka 12-aad. Xarunta diiwaan-galinta ardada ayaa qoysaska kala shaqaysaa in loo helo boos arday kasto oo ku nool degmada St. Paul. Haddi ay fasalada kahoreeya Kindergarten buuxsamaan, liis sugaal ah (waitlist) ayaa la galiyaa ardada, haddii boos soo baxana waa lala soo xiriiraa. Diiwaan galintu waxaa lagu saleynayaa sida ay mudnaadta u kala leeyihiin. Fiiri bogga X wixii faah faahin ah.
Ma laiga rabaa inaan cadeeyo cinwaanka/adreeska aan dagnahay?
Waa suurta gal in lagaa codsado in aad soo cadaysid cinwaanka aad daggantahay. Cinwaanka waxaa loo isticmaalaa fududaynta diwaan-galinta iyo sidoo kale gaadiidka iskuullada. Cadaymaha loo baahan karo waxaa ka mid ah kaarka state-ka (State ID), drivers license, ama warqadaha sida biilasha korontada si loo xaqiijiyo cinwaanka aad ku nooshahay.
Soonaha iyo Aagga uu iskuulku ku yaalo
Waa Maxay Soonaha Dugsiyada Xaafada/Community School?
SPPS waxuu u sameeyay iskuullada bulshada Community School soonayaal si ay qoysaska deggan aaggaasi u helaan fursad dheeri ah. Waxaa muhiimad dheeri ah la siinayaa ardayda deggan gudaha soonahaas haddii ay codisyada diwaan-galinta soo dhiibtaan inta ka horeysa Febraayo 23, 2018 ardada deggan gudaha xuduuda soonaha iskuulku ku yaalo waxaa loo siinayaa mudnaan dheer ah aqbalitaanka iskuulkaasi. Sababaha xuduuda loogu sameeyay iskuullada bulshada/Community School waxaa ka mid ah:
Waa maxay “aag”?
Aaggu waa lixda qeybood ee degmadu u kala qaybsantahay (A-F1/F2). Sanadkii lasoo dhaafay xuduuda aaggagu waxbo iskama bedelin. Aaggaga waxaad ka eegi kartaa qariiradda buugan ku daabacan sidoo kalena waxaad ka heli kartaa adeega school finder ood ka heli karto barta internetka ee apply.spps.org.
Waa maxay waddada “ariculations” iyo iskuulada bulshada?
Iskuullada degmada iyo kuwa loo yaqaan magnet schools wxaa ay leeyihiin barmaamij waxbarasho sida in luqad aan ingriis ahayn ilamaha lagu baro (language immersion) ama cilmiga dayuuradaha oo ardadu ay ku wadan karaan laga bilaabo dugsiga hoose ilaa kan dhexe ilaa iyo mid sare. Waa in uu ardaygu buuxiyo shuruudaha degmada iyo shuruudaha khaaska ah ee u degsan iskuullada magnet inta uusan galin.
Haddii aan doorto iskuul ka baxsan aaggayga balse aanan helin, ma waxaan boos ka helayaa iskuulka bulshada (community School)?
Maya. Maadaama ardadu ay codsiyadoodu ku dooran karaan labo iskuul, waa mid ka mid ah ka dhigaan community school haddii ay sidoo kale doonayaan in ay codsadaan iskuul ka baxsan aagga ay deggan yihiin. Ma jirto iskuul aad adigoo codsanin helaysid ama mid la hubo in lagaa aqabalayo. Ardadu waa in ay codsadaan isla markaasna la xiriiraan xarunta diiwaangalinta ardada.
Haddii aan deganahay meel ka baxsan balse u dhow aagga iskuulku ku yaalo, oo uu ilmahaygu rabo in uu dhigto dugsiga sare ma u helayaa fursad dheeri ah boosaska furan?
Maya. U dhowaanshaha iskuulku ma ahan waxa la fiirinayo marka ardada laga qaabilayo dugsiga sare
Ma inaan raaco baa community school pathways-ka ka jira xaafadayda?
Khasab ma’ahan in aad raacdid. Barmaamijka community pathway waxuu u jiraa kaliya in ilmahaagu iskuulka uu ladhigto ardada kale ee xaafada la deggan. Qoysasku waxaa u banaan iskuullada kale oo aanan ahayn kuwa Komminitiga haddii ay ka helaan boos sidoo kale ay buuxiyaan shuruudaha ay iskuuladaas ka rabaan ardaygu.
Gadiid/transportation lama siiyo ardada dhigto iskuul ka baxsan aagga ay ku nool yihiin. Barmaamijyada iskuulada bulshada/community schools waxay siiyan ardayga qorshe toos ah laga bilaabo kindergerteen ilaa iyo dugsiga sare.
Haddii uu ilmahaygu dhigto iskuulada loo yaqaano magnet schools ee heer degmo iyo heer gobol haddii uu iskuulku ka baxsan yahay aagga aan degganahay ilmahaygu boos ma ka helayaa markuu ka gubdo heerka uu hada dhigto?
Haa , wuu helayaa boos umana baahna inuu codsado.
Ahmiyaddaha lagu aqbalo ardayda.
Waa maxay ahmiyadduhu la tix-galiyo marka iskuulku aqbalayo arday?
Ahmiyaduhu waxaa ay leeyihiin heerar kala duwan oo lagu qiimeeyo sida uu ardaygu ugu qalmo in la aqbalo. Waxaad ka eegi kartaa macluumaad ku saabsan ahmiyadahaas bogga X
Waa maxay ahmiyada ay leedahay in ilmaha walaalkiis ama walaashiis uu dhigto/dhigato iskuulka aad codsanaysid?
Ahmiyadani waxay u saamaxaysaa in qoysasku ilmaha u wada dhigtaan hal iskuul. Ardayga ahmiyadan leh waa midka uu arday la dhashay dhigto iskuulka aad codsanaysid sanadka 2017-18 sidoo kale waa inuu ardaygu sii dhigani doono iskuulkaas sanadka 2018-19.
In uu ilmo kale kuu dhigto iskuulka, kuuma siinayso xaqiiq in ilmahaaga kalana laga aqbalayo isla iskuulkaa.
Qeexida walaalahu waa: caruur isku waalid ama isku hogaamiye ah, hal gurina kuwada nool.
Ka hor intaan la tix galinin diwaan galinta caruurta walaalaha ah ee hal iskuul, waxaa la eegayaa iskuulka baaxaddiisa iyo inta arday ee laga diwaan galin karo.
Haddii ilmo aan dhalay dhigto fasalkii ugu dambeeyay iskuulka balse aan rabo in walaalkiis ama walaashiis iskuulkaas aan keeno, ma la hubaa inaan boos u helayo?
Maya, waxaa shuruudaha ahmiyadaha ardada wada dhashay ka mid ah inuu ardayga wayn sii dhigan doono iskuulka sanad kale.
Ilmahaygu ma loo ogolyahay inuu baska iskuulka u raaco?
Akhbaarta ku saabsan ardada xaqqa u leh raacitaanka baska ka fiiri bogga X
Ma runbaa in ardada dhigata iskuulka hoose heli karaan baas ay u raacaan iskuul kasto oo ku yaalo aagga ay degganyihiin?
Haa, haddii aysan ka baxsanayn qawaaniinta gadiidka. Qawaaniinta gaadiidka Ka eeg bogga X ee buugaan.
Ilmahaygu ma dhigan karaa dugsiga hoose oo ku yaalo meel ka baxsan iskuulada xaafada aan deganahay?
Waa in aad codsatid haddii aad doonaysid iskuul ka baxsan xaafadaada. Waxaadse ogaataa in aadan xaq u lahayn adeega basaska.
Ilmahaygu ma dhigan karaa dugsi hoose oo u dhow day care-ka uu aado balse ka baxsan aagga aan degganahay?
Waa in ay codsadaan haddii ay qoysasku doonayaan in ay ilmahoodu u adhigtaan iskuul ku dhow day care-ka ay aadaan hase yeeshee lama hubo in laga aqbali doono iskuulkaasi marka ay codsadaan.
Haddii uu arday ii dhigto iskuul ka baxsan aagga aan deggnahay oo aan soo gaarsiiyo meelaha basaska looga raaco iskuulka uu dhigto ma helayaa baas ka sii qaado?
Maya, waa in aad adigu keentid ilaa iyo iskuulka haddii ilmahaagu laga aqbalo iskuul ka baxsan aagga aad deggantahay. In kasto oo ay u muuqato xal fudud, ilmahu xaq uma lahan raacidda baska.
Ardaygu ma dhigan karaa iskuul bixiya shahaadada caalamiga ah oo ku yaal meel ka baxsan aagga aan degganahay? Baas miyuu u helayaa? Sidoo kale barmaamijka IB-ga miyuu qaabilaa ardada ka timaada meel ka baxsan aagga uu kuyaalo iskuulka?
Ardadygu waa inuu codsadaa haddii uu doonayo barmaamijka shahaadada caalamiga ah oo ka baxsan aagga uu degganyahay laakiin waxaa uu lagu qaabilyaa haddii uu boos ka banaanyahay. Xitaa haddii la qaabilo baas ma helayaan.
Ma shardi baa in lagaa qaabilo barmaamij bixiya shahaadada caalamiga ee International Baccalaureate (IB)/ ama in aad qaadanaysid koorsooyin koolijiyadda ah (AP) si aad ugu qalantid gaadiidka basaska? Qaabkee ayaa lagu codsan karaa barmaamijyada noocaas?
Maya, ardaygu uma baahno inuu qaadanayo barmaamijyadaasi. Si loo diiwaan-galiyo ayaa ardaygu waxaa laga rabaa inuu oogu yaraan qaato hal maado oo tusinayso inuu ardaygu ka qayb qaadanayo barmaamijyada IB/AP. Ardaygu wuxuu xaq u yeelanayaa gaadiid baas oo geeyo iskuulka haddii u codsada inuu ka qayb qaato barmaamij IB/AP oo heer gobol lagu bixiyo.Haddii uu ardaygu joojiyo fasalladaasi uu ka qaadanayay iskuulkaasi ka baxsan degmada, sidoo kale waxaa la joojinayaa baaskii halkaasi gayni jiray.Tirada ardada ee gali kata barmaamijyada ayaa xadidan.Ardada hore usii dhigata barmaamijyada khaaska ah ayaa marka hore la diiwaan-galiyaa kadibna boosaska soo haro ayaa loo qaybiyaa sida ahmiyada loo kala leeyahay.
Maxaa dhacayo marka ilmahaygu laga aqbalo iskuul?
Qoysasku waxay helayaan qoraal ama email ogaysiinaysa aqbalitaanka. Ardaygu waxaa laga diiwaan-galin karaa hal iskuul oo kaliya.
Maxaa dhacaya haddii ilmahayga laga aqbali waayo iskuulkii aan doortay?
Magaca ardayga ayaa waxaa la galinayaa liiska sugitaanka (waiting list) iyadoo la tix raacayo xeerarka doorashada dugsiyada. Haddii uu boos kasoo baxo iskuulka, waa lagu soo wici fursadna waxaa laguu siin inaadilmahaaga ka diwaan galiso iskuulka. Si aad wax uga ogaato doorashooyinka kale ee diwaan galinta ee kuu furan, fadlan waxaad soo wacdaa xarunta meeleynta ardayda 651-632-3760.
Muxuu yahay Liiska Sugitaanku?
Liiska sugitaanka waxaa loo sameeyay iskuullada iyo barnaamijyada codsiyo kabadan inta ay u hayaan kuraas ama baaxad. Doorashadaada kobaad ayaa marka hore la tix galinayaa.
Ardayda waxaa lagu daraa liiska sugitaanka iyadoo liiska loo galinayo hab ku salaysan iskuulkooda doorashada koobaad. Liiska sugitaanku wuxuu munaasab yahay haddii:
Suurto–gal ma tahay in ilmahaygu galo in kabadan hal ‘wainting list’?
Maya, ardaygu waxuu geli karaa hal ‘waiting list’ oo kaliya. Waiting list-ka waxaad ka geli kartaa iskuulka kuu ah dhookhaaga kowaad oo kaliya.
Haddii aan degnahay iskuulka agtiisa, ma hubaalbaa in iskuulkaas heli doono?
Maya, Fursadda aad u leedahay in aad iskuulka heshid waxay ku xirantahay in aad deggantahay soonaha uu iskuulka ku yaalo marka la tix-raaco (A-F1/F2) ee kuma xirna dhawaanshaha degaankaaga marka la’eego juquraafi ahaan.
Muxuu yahay “standard-based”?
Wakaalada wax-barashada ee Minnesota ayaa go’aamisa xadka aqooneed “standard knowledge” oo ardadu laga rabo inay ku bartaan fasal walibo iyo maada walibo. SPPS waxay waafajisay manhajkeeda wax-barasho nidaamka guud ee wakaaladu dajisay.
Sidee ayaan ku ogaan karaa waxa uu ilmahaygu ka barto iskuulka?
Si aad u ogaatid maadooyinka laga barto sikuuladeenu, fadlan booqo barta internetka ee u leeyahay xafiiska wax-barashada: thecenter.spps.org sidoo kale ka eeg bogga X ee buugaan ama booqo : spps.org/otl.
Xagee ayaan ka heli karaa natiijada imtixaanaadka iskuulada?
SPPS wuxuu fududeeya heltaanka natiijada imtixaanaadka. Fadlan booqo bogga School Data Center datacenter.spps.org.
Maxay ku kala duwanyihiin labada nooc ee ardayda luqadaha aanan ingriiska ahayn wax loogu baro ee dual language-ka loo yaqaano?
Farqiga u dhaxeeya labada qaab ee luqadaha lagu bartaa waa luqadda uu ardaygu ku hadlo. One-way immersion waxaa loogu talo-galay aradayga ay luqadiisa hooyo tahay ingriis inuu barta luqad kale. Dual language immersion waxaa loogu talo galay in ay adrada luqadooda kowaad ay tahay ingriiska iyo kuwa ay tahay luqqado kale ay hal fasal kuwada bartaan luqadda ardayga kale. Waxii akhbaar dheeri ah kala xiriir xafiiska barahada luqadaha 651-767-8320.
Qaabkee ayaan ku ogaadaa inuu barmaamijka after-school ka jira iskuulka ilmahaygu dhigta?
Haddii aad rabtid akhbaar khaas ah oo ku saabsan after-schoolka wac iskuulka. Fadlan ogow in jiritaanka barmaamijyada isbadeli karaan ilaa iyo deerta -2018. Ka eeg bogga XX akhbaar dheeraad ah oo ku saabsan fursadaha after-schoolka.
Muxuu yahay farqiga u dhexeeya barmaamijyada AP iyo IB?
AP iyo IB labaduba waxay ardayga u siinayaan fursad uu ku qaadan karo koorsooyin la dardar galiyay. AP oo ah Fasallada koolijiyada oo ardaygu sii qaato asagoo dhiganayo dugsiga sare. Koorsooyinka waxaa soo saaray gudiga kulijiyada oo ah urur ardada dugsiyada sare ku xiro fursado jaamacadeed. Aradayda dugsiga sare ee qaadata fasallada AP-ga waxay fursad u yeelanayaan in koorsoyinka loogu qadariyo heer jaamacadeed haddii ay imtixaanka AP-ga qaataan.Koorsooyinka IB-ga waxay qayb ka yihiin diploomada IB-ga oo mid calaamka muctarif ka ah.Ardada qaadato koorsooyinka IB-ga waxay fursad u helayaan in ay koolijiyadaha u qadariyaan koorsooyinka ay ku qaataan IB-ga haddii ay imtixaannada ku baasaan. La-xiriir Konsilaar-ka iskuulka si uu faahfaahin dheeraad ah kaaga siiyo barmaamijyada IB iyo AP.
Haddii aan u qalmo cunnada lacag la’aanta ah ama mid qiimo jaban, ma waxaa jiro caawimaad kale oo aan u qlamo?
Haa. Waxaad u qalantaa barmaamijka WIC (ama food stamp-ka) haddii aad uur tahay ama aad leedahay caruur da’doodu ka yarthay shan sano jir. Waxaa lagaa doonayaa in aad gaysid warqadda xannanda iskuulku ku siyay xafiiska Ramsey County barmaamijka WIC. Waxaa laga yaabaa sidoo kale in aad u qalantid kaar caafimaad sida MNSure, MinnesotaCare, kaarka MA-ga. Akhbaar dheeraad ah ka wac qaybta xanaanada ee Saint Paul Public Schools 651-603-4950, sidoo kale waxaad la xiriiri kartaa xafiiska caafimaadka eek u yaala xarunta placement center oo aad ka wici kartid 651-632-3763 ama spps.org/studentwellness.
Xaq uma lihi cuntada lacag la’aanta ah ama qiimaheeda la dhimay ilmahayguna wuxuu helaa qado lacag la’aan, see bay arrintani ku dhacdaa?
skuullo badan oo katirsan Saint Paul ayaa waxay ka qayb galaan barnaamijka (United States Department of Agriculture’s (USDA) Community Eligibility Provision (CEP) program. Barnaamijkan ayaa u ogalaada ardayda iskuulka oo dhan inay helaan qado nadiif ah oo lacag la’aan ah. Dhammaan ardayda dhigata iskuullada dadweynaha ee Saint Paul waxay helaan quraac lacag laaan ah.
Iskuullada ay ardaydaydooda oo dhan helaan qadada lacag la’aanta ah waxaa lagu saleeyay tirada ardayda u qalanta cuntada lacag la’aanta ah oo tira ahaan ka badan kuwo kale. Wixii war bixin ah ee dheeraad ah, fadlan booqo spps.org/nutrition.
Talaallada looga baahanyahay Ardayda
Ilmahaygu ma wuxuu u baahanyahay inuu talaal qaato si uu iskuulka u dhigto?
Qaanuunka u dhegsan state-ka (MS 121A. 15) ayaa dhiigaya in arday kasto oo Minnesota joogo la talaalo si looga badbaadiyo cudurrada dhalaanka. Waalidiinta waxaay si sharci ah ku keensan karaan dokumeentiyo ka dhaafayo talaalka haddii ay u diidan talaalka sababo caqiido iyo kuwa caafimaad.Arday kasto oo cusub oo Saint Paul Public Schools usoo wareego waa in uu keenaa xarunta diiwaan-galinta ardada talaalladiisii hore ama warqad ka dhaafayso.Cudurrada laga talaalayo waxa ka mid ah diphtheria, pertussis and tetanus (DPT); polio; measles, mumps and rubella (MMR); Hepatitis B iyo varicella (chicken pox).
Ardada bilaabayo Saint Paul Public Schools, xarunta diiwaan-galinta ayaa u samaysaa qiimayn caafimaad iyo dib-u-eegid talaalada. Waxaa kale oo ay xaruntu talaalo u diyaarisaa ardada aanan haysanin kaar caafimaad. Akhbaar dheeri ah ka la xiriir xarunta diiwan-galinta ardada 651-632-3763 ama booqo spps.org/studentwellness.